Inona avy ireo torohevitra SEO haingana azonao omena ahy?
Satria efa manaporofo fa ny antsasaky ny fifamoivoizana dia mivantana mivantana avy amin'ny valin'ny fikarohana biolojika, avelao aho hanome toro-hevitra avy amin'ny SEO haingana mba hampitombo ny fifamoivoizanao. Eny e, alohan'ny hanombohantsika, te-hanome toky anareo aho fa ny fampisehoana anareo toro-hevitra momba ny SEO dia tsy midika mihitsy hoe hampihatra izay trangam-panitsakitsahana rehetra, teknolojia manelingelina, na mandà an'Andriamanitra aho, ireo tetika rehetra misy fifanarahana amin'ny Black - Manatsara ny fitadiavam-bidy. Ny toro-làlana SEO haingana dia mifototra amin'ny hetsika ampiasaiko ampiasaina fotsiny, mifanaraka amin'ny fironana farany amin'ny indostria, ary avy amin'ireo fiovana farany indrindra amin'ny algorithm amin'ny Google. Andao àry aloha e!
Eto aho dia hifantoka amin'ny sombintsombiny, satria amin'izao fotoana izao dia iray amin'ireo tontonana malaza ao amin'ny SEO Community - uster wetzikon. Noho izany, andeha hojerentsika ireo toro-làlana SEO haingana momba ny fanatsarana ny sombintsombin'ny SERP ho fanangonana traikefa organika.
Quick SEO soso-kevitra hampitombo ny fifamoivoizana organikaly miaraka amin'ny SERP snippets
alohan'ny hanombohantsika, ny SERP dia mahazatra ny valin'ny fikarohana rehetra hitantsika amin'ny Google rehefa manoratra ny fikarohana. Mazava ho azy, ny SERP dia afaka manana endrika hafa tanteraka, arakaraka ny teny fanalahidy manokana ampiasaintsika amin'ny fangatahana karoka. Amin'ny fanaovana izany, indraindray izahay dia mety ho hita amin'ny sarintany Google na horonantsary mifanaraka amin'izany.
Miverina amin'ny lohahevitra, ny sombin-tsoratra seripika mahazatra dia ahitana ampahany 3 maina, toy ny Page Title, Page URL, ary Meta Description. Andeha hojerentsika hoe inona ireo toro-làlana SEO haingana dia azo ampiharina amin'ny singa tsirairay ao amin'ny tsipiky SERP:
Pejy Lohateny dia voatendry hijanona eo amin'ny 55-60 karazany mba hampisehoana ny motera fikarohana. Ataovy toy izao ny teny fanalahidy tsara indrindra, ary manorata lohateny an-tsoratra mba ahafahana manana toerana ambony kokoa mivantana eo amin'ny valin'ny fikarohana.
Pejy URL dia ampahany faharoa ilaina amin'ny tsipika rehetra. Rehefa manatsara ny URL-nao pejy ianao, dia tadidio fa efa fohy izy ireo, nefa mbola manan-danja sy mandray anjara amin'ny klikan'ny mpampiasa. Raha ny amin'ny karoka fitadiavana, avelao izy ireo hahita ny adiresy manan-karena amin'ny teny fanalahidy ho an'ny laharana ambony. Mariho anefa, manàna faharetana hamita ilay asa manontolo, satria rehefa manova ny URL -nao ianao ary mahazo toerana tsara ao amin'ny SERPs, ny fanitsiana an-tserasera manaraka na ny fanovana hafa dia mety mahatonga ny pejy handao ny tombony teo aloha.
Ny Meta Description dia natao hanome fanamafisam-peo mazava sy marina, izay tokony hahasarika ny mpamily sy ny mpampiasa. Famaritana momban'ny Meta dia voatendry haharitra mihoatra ny tarehimarika 156. Mariho anefa, fa ny rafitry ny finday ao amin'ny tranonkalanao dia manana farafaharatsiny farafaharatsiny farafahakeliny hatramin'ny litera 120. Ataovy tsara ny fanoritsoritana ny metanao pejy, manankarena amin'ny teny fanalahidy izy ireo nefa mbola mahafinaritra sy manintona ireo mpampiasa mivantana. Raha manao izany ianao, dia afaka manana fanatsarana goavana amin'ny fampiasana tsindry amin'ny mpampiasa. Na dia tsy misy fiantraikany mivantana amin'ny toerana misy anao na ny fifamoivoizana aza ny famaritana meta dia mety hitarika amin'ny fanekena tsaratsara kokoa sy farany ny valin'ny fikarohana ao amin'ny Google.